VISA WAIVEROGROGRAM (VWP) - ESTAmerica US ESTA E-Filing Traveling Services
Ònye ruru eru itinye akwụkwọ maka ESTA n'okpuru usoro Visa Waiver (VWP)?
Ị nwere ike ịga n'okpuru Visa Waiver Program (VWP) ma ọ bụrụ na ị:
Na-abanye United States maka azụmahịa, njem, njem ma ọ bụ mmemme ọmụmụ ihe na-adịte aka (enweghị akwụkwọ).
Ga-anọ na United States maka ihe na-erughị ụbọchị 90.
Jide akwụkwọ ikike ziri ezi nke Visa Waiver Programme program nyere.
Jiri ụgbọ mmiri VWP kwadoro laghachi ma ọ bụ gaa na tiketi.
Enwetarala onye a kwadoro A ikike njem.
A nabatara ịbanye n'aka onye uweojii na ndị na-ahụ maka ọdịda na United States mgbe ị rutere n'ọdụ ụgbọ mmiri gị.
Ndị ọchịchị na-ahapụ ikike ịkwado, zoo, ma ọ bụ nyochaa mkpebi nyocha nke onye nlekọta na ndị ọrụ nchebe nke United States, gụnyere mkpebi ọ bụla iji wepu gị site na United States dabeere na ngwa Visa Waiver Program.
Debe ikike ndị ahụ iji nyochaa, rịọ arịrịọ, ma ọ bụ ịlụ ọgụ ọ bụla mwepụ site na United States metụtara Visa Waiver Programme ngwa site na ịnye ihe ọmụma bio-metric chọrọ (foto na / ma ọ bụ mkpịsị aka) n'elu ịbanye na United States.
Ekwenyela na ọnọdụ niile nke Visa Waiver Program n'oge ọ bụla ị nabatara na United States n'okpuru usoro a.
Kedu usoro Visa Waiver (VWP)?
Visa nke Visa Waiver (VWP), nke Ngalaba Na-ahụ Maka Nchebe n'Ebe Obibi (DHS) na-elekọta ya na Ngalaba Nchịkwa, nyere ụmụ amaala nke 38 ohere ịga United States maka azụmahịa ma ọ bụ njem nleta maka ụbọchị 90 n'enweghị visa . Na nloghachi, mba 38 ahụ ga-enye ndị amaala na ndị mba America ohere ịga mba ha maka oge yiri nke a na-enweghị visa maka azụmahịa ma ọ bụ atụmatụ nlegharị anya.
Pịa ebe a iji lee ndepụta.
Ndị na-eme njem n'isiokwu ndị a agaghịzi eru ịga njem ma ọ bụ kweta na United States n'okpuru Visa Waiver Programme (VWP):
Mba nke mba VWP bụ ndị gara ma ọ bụ nọ na Iran, Iraq, Sudan, Syria, Libya, Somalia na Yemen na ma ọ bụ mgbe March 1, 2011 (na-enweghị oke maka njem maka nnọchiteanya diplomatic ma ọ bụ agha na-arụ ọrụ nke mba VWP ).
Mba nke mba VWP bụ mba ndị Iran, Iraq, Sudan, ma ọ bụ Syria.
Na mgbakwunye, dịka nke April 1, 2016, ị ga-enwerịrị e-paspọtụ iji VWP. E-Paspọtụ bụ paspọtụ nchekwa dị mma nke nwere mgbawa kọmputa. Ị nwere ike ịchọpụta e-paspọtụ ngwa ngwa, n'ihi na o nwere akara mba pụrụ iche na mkpuchi ahụ.